Olee otú Download Hulu Plus Videos Easily on Mac
> Resource> Download> Olee otú Download Hulu Plus Video on Mac na One Click
Hulu, dị ka otu n'ime ndị kasị ewu ewu video saịtị, na-enye dị iche iche videos ekpuchi TV, ihe nkiri sịnịma, webisodes, trailers, mkpachị na ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọtụtụ nke vidio ndị free mgbe ị nwekwara ike ịhọrọ denye aha na Hulu gbakwunyere na ohere ọzọ ọdịnaya. Ihu ọma, Hulu Free na Hulu Plus na-na nye gụgharia ọrụ na e nweghị nhọrọ ibudata videos maka offline playback. Otú ọ dị, na Wondershare AllMyTube for Mac, ihe niile kwere omume. Ọ na-enye gị ike ibudata ọ bụla video si Hulu on Mac na tọghata ebudatara Hulu videos ka ọ bụla usoro iji kwado gị obere ngwaọrụ. Anyị ga-a anya na otú ibudata Hulu Plus videos n'okpuru.
Update: AllMyTube for Mac ka okosobode-atụghị anya nsogbu na Hulu Plus nbudata na anyị na-arụ ọrụ na idozi ya ozugbo anyị nwere ike. Dị ka ogologo oge ọ na-akwado nbudata Hulu Plus ọzọ, ga-ekwe ka ị maara.
1 Chọta Hulu Plus videos-amasị gị
Mepee hulu.com na ịnyagharịa ka Hulu Plus page. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ọkacha mmasị gị na tiivi na-egwu. Gịnị bụ uru arịba ama ebe a bụ na i kwesịrị-egwu videos na otu nke na-esonụ atọ nchọgharị: ntụgharị, Chrome na Firefox. Na otú ahụ, ndị videos nwere ike achọpụtara site na nke a smart usoro.
Detuo url nke video na pịa Paste Url bọtịnụ na isi window. Mgbe ahụ, a omume ga-amalite ibudata video ozugbo. Ma ọ bụ i nwere ike dị nnọọ ịdọrọ URL nke Hulu Plus video na dobe ka usoro ihe omume na-amalite usoro.
Ọ dị ụzọ ọzọ ibudata Hulu Plus video. Mgbe ị na òké n'elu na elu nri nke video ihuenyo, e ga-apụta a sere n'elu Download bọtịnụ. Pịa bọtịnụ na usoro ihe omume ga-amalite ibudata Hulu Plus video ke otu ụzọ.
Tịm fiọk: Ị nwere ike tinye ọtụtụ vidiyo na nbudata kwụ n'ahịrị site ma nke ụzọ atọ. Nke a na usoro ike ibudata 5-10 videos n'otu oge otú i nwere ike ịzọpụta a otutu oge.
3 tọghata Hulu Plus videos (nhọrọ)
Mgbe Hulu Plus videos na-ebudatara, i nwere ike ịhụ ha na ebudatara n'ọbá akwụkwọ na ihe ọmụma zuru ezu dị ka nha, video aha na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata videos iji igwu gị obere ngwaọrụ, i nwere ike mkpa iji tọghata videos mbụ. Pịa tọghata bọtịnụ na nri nke video ihe ahụ na họrọ a usoro dị AVI, MOV ma ọ bụ ọbụna iPad, iPhone na-mmepụta usoro. Mgbe ahụ, pịa OK iji nweta ya mere.
Cheta na: ịgbanwee na toggle bọtịnụ nke Download mgbe ahụ tọghata na họrọ a họọrọ format na-mmepụta format, mgbe ahụ Hulu Plus videos ga-akpaghị aka ghọrọ ka format mgbe ebudatara.
Mgbe converting, ị nwere ike nyefee Hulu Plus videos gị obere ngwaọrụ dị ka iPad maka playback. Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ị kwesịrị ị na ibudata a omume na-enye ya a ogbugba. Ị dịghị mgbe a ga ka ala.
Olee otú Download Videojug vidiyo na a Click
Olee otú Download Twitch.tv Video Mfe